सुदूरपश्चिममा सरकार फेरबदलको चर्चा, नेतृत्वमा आउँछ त काँग्रेस ? - नागरिक रैबार
सुदूरपश्चिममा सरकार फेरबदलको चर्चा, नेतृत्वमा आउँछ त काँग्रेस ?
धनगढी :सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउनेबारे छलफल केन्द्रित भएको छ। केन्द्रमा बनेको गठबन्धनअनुसार प्रदेशमा पनि सरकार बनाउनका लागि कसरत सुरु भएको हो।
माओवादी नेतृत्वको सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विश्वासतको मत लिदा तटस्थ बसेको नेपाली काँग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा माओवादी, एमालेको माधव समूह र जसपालाई मिलाएर सरकार बनाउने कसरत सुरु गरेको हो। काँग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले काँग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउनेबारे छलफल भइरहेको बताए।
‘गठबन्धनअनुसार केन्द्रमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेको छ,’ काठमाडौँमा रहेका रावलले भने, ‘प्रदेशमा पनि सोही गठबन्धनअनुसार सरकार बनाउनका लागि छलफल भइरहेको छ। सरकारको नेतृत्व गर्नेबारे पनि छलफलमा छौ।’ अहिले काँग्रेस संसदीय दलका नेता रावल मात्र नभएर मुख्यमन्त्रीसहित अधिकासं मन्त्री र एमालेको माधव समू्रहका सांसद काठमाडौँमा छन्।
यता माओवादीले साढे तीन वर्ष सरकारको नेतृत्व गरिसकेको भन्दै नेकपा एमालेको माधव समूहले पनि सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ। अहिले माओवादीको सरकारमा एमाले माधव पक्षको मात्रै सहभागिता रहेको छ।
‘सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्न पाएको छैन्,’ माधव समूहका एक सांसदले भने, ‘हामीले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने अडान लिएको छौ। त्यो सरकारमा काँग्रेसलाई पनि सहभागि गारउनुपर्ने धारणा हाम्रो छ।’
यता माओवादी केन्द्र र एमाले माधव समूहबाट भएका मन्त्रीहरुले भने अहिलेकै सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अडान लिएका छन्। उनीहरुले माओवादी नेतृत्वको सरकारमै काँग्रेस सहभागी हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट र प्रचण्डबीच भेटवार्ता, के भयो छलफल ?
राजीनामा फिर्ता लिन भीम रावललाई सुदूरपश्चिमका १४ सांसदको दबाब
जिल्ला अस्पताल बाजुरामा उपचारार्थ दुई बच्चामा देखियो डेल्टा भेरिएन्ट भाइरस
नागरिक रैबार विहिवार २१ साउन । जिल्ला अस्पताल बाजुरामा उपचारार्थ दुई बच्चामा देखियो डेल्टा भेरिएन्ट भाइरस देखा परेको छ । जिल्ला अस्पताल बाजुरामा रुगाखोकी तथा स्वासप्रस्वासमा समस्या भई बिरामी भएर आएका दुई बच्चामा उक्त भाइरस देखा परेको हो । जिल्ला अस्पताल बाजुुराले धनगढी हुँदै काठमाडाँै रिफर गरेको एक १० वर्षीया बालकलाई कोरोना भाइरसको प्रकारलाई जनाउने […]
१५ हजार स्थायी शिक्षकको पदपूर्ति प्रक्रिया खुल्यो
काठमाडौँ — मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षक सेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गरेसँगै स्थायी शिक्षक पदपूर्ति, बढुवा र स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) परीक्षाको बाटो खुलेको छ । पदाधिकारी सिफारिस भएको सात महिनापछि सरकारले मंगलबार आयोगमा अध्यक्षसहित दुई सदस्यलाई नियुक्त गरेको हो । नवनियुक्त अध्यक्षमा पूर्वसचिव मधुप्रसाद रेग्मी, सदस्यहरूमा पूर्वसहसचिव डिल्लीराम रिमाल र पूर्वप्रधानाध्यापक नन्दकुमारी महर्जन छन् । विज्ञापन आयोगका प्रशासकीय प्रमुख […]